Niainga tamin’ny anarana natolotry ny Mapar : voatendry ho praiminisitra i Ntsay Christian | NewsMada
Niainga tamin’ny anarana natolotry ny Mapar : voatendry ho praiminisitra i Ntsay Christian
Notendrena ho Praiminisitra lehiben’ny governemanta i Ntsay Christian. Nampahafantarin’ny sekretera jeneralin’ny fiadidiana ny Repoblika, omaly teny Iavoloha izany, nialohavan’ny hafatrafatra avy amin’ny filoham-pirenena.
Tapitra, anio ny fe-potoana nomen’ny HCC ny tokony hitsaharan’ny asan’ny praiminisitra sy ny governemanta notarihiny. Niroso tamin’ny fanendrena ny ho mpitantana vaovao, araka ny voalazan’ny lalàmpanorenana, And 54 sy miainga koa amin’ny nambarany fa fifanarahana politika ny filoham-pirenena, omaly. Voatendry ho praiminisitra sy lehiben’ny governemanta i Ntsay Christian. Anisan’ireo anarana telo natolotry ny Mapar ny tenany, ankoatra ny lisitra faharoa, Rakotoarisoa Florent, sy ny jeneraly iray, efa nisotro ronono. Efa nanolotra lisitra telo hafa nialoha azy ireo ny Mapar, saingy notsipahin’ny eny Iavoloha ny herinandro teo. ”Aoka isika hanaraka ny fandaminana ary hifantoka amin’ny asa manomboka izao. Hapetraka ny fitoniana eto amin’ny firenena satria mendrika izany ny firenena”, hoy ny filoha Rajaonarimampianina nialoha ny nanonona ny didim-panjakana manendry ny Praiminisitra Ntsay Christian. Nambarany fa anisan’ny andraikitra hosahanin’ny governemanta vaovao ny fampandehanana ny fifidianana. Fa eo koa ny fampandrosoana ny firenena.
Iza moa ny Praiminisitra Ntsay Christian ?
Teraka tamin’ny taona 1961 izy, manambady ary niteraka roa. Nahazo Bacc tany Antsiranana, nanohy fianarana tamin’ny sampana toekarena sy fitantanna teny amin’ny oniversite Antananarivo, taona 1985. Nanohy fianarana tany Paris sy Marseille, Frantsa, nahazoany ny mari-pahaizana, dingana III amin’ny teknikam-pitantanana sy fitantanana orinasa.
Ny asa niandraiketany sy ny traikefa ananany : tao amin’ny orinasa Secren, Antsiranana, no tena nahalalana azy, izay niasany nandritra ny enin-taona. Ny niafarany tamin’izany, tale jeneralin’ny Secren. Efa tale jeneralin’ny Solitany malagasy (Solima) izy taty aoriana, taona 1993-97. Teo anelanelan’izay, mpandrindra nasionalin’ny tetikasa “Entreprendre à Madagascar“, niarahana tamin’ny Birao iraisam-pirenena momba ny asa (BIT) sy ny Pnud.
Efa filohan’ny filankevi-pitantanan’ny orinasam-panjakana samihafa misahana ny fizahantany toy ny FMTH, CCM, tany Andilana Beach, izy.
Efa fakan-kevitra eo amin’ny sehatra nasionaly sy iraisam-pirenena izy ho an’ny Pnud, ny Vondrona eoropeanina, ny Banky iraisam-pirenena… Ary efa manampahaizana iraisam-pirenena manokana tamin’izany koa.
Efa minisitry ny Fizahantany izy, taona 2002-2003. Solontenan’ny Vondrona iraisam-pirenena momba ny asa (OIT), teto Antananarivo, ho an’ny Nosy Kaomoro, i Madagasikara, i Maurice ary i Seychelles, izy nanomboka ny taona 2008.
Araka izany, andrasana ny ho fitsanganan’ny governemanta hotarihin’ny Praiminisitra Ntsay Christian. Tahaka izany koa ny ho fiandrasana ny valin-kafatra eny amin’ny kianjan’ny 13 mey anio.
Synèse R. Sy R.Nd